महिनावारी हुँदा पेट दुखे समस्या छ भने यसो गर्नुहोस्! - Nepal News - Latest News from Nepal
महिनावारी हुँदा पेट दुखे समस्या छ भने यसो गर्नुहोस्!
महिला भन्नेबित्तिकै हाम्रो समाजमा विभिन्न रुपले हेरिन्छ। कहिले कालि त कहिले दुर्गा तर यहि समाजमा महिलालाई तल्लो रुपको दर्जा पनि दिन्छ। त्यो पनि महिनावारी अर्थात मिन्स भएको बेला। महिनावारी हुन्ने वित्तिकै परीवार बाछ अलग राख्ने, छुन नदिने र दाजुभाईलाई हेर्न नहुने भन्ने मान्यता अहिले पनि हाम्रो समाजमा जिवित नै छ । तर आज हामीले महिनावारी हुँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुका बारेमा जानकारी दिन्छौँ:
महिनावारीका बेला सफाइमा बढी ध्यान पुर्याउनु पर्छ। कतिपयमा महिनावारी हुँदा चार दिनसम्म नुहाउनुहुँदैन, यस्तो बेला फोहोरी भएर बस्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने सोचाइ हुन्छ। यो गलत सोच हो। यस्तो बेला किशोरीहरूको योनिबाट रगत तथा शरीरबाट बढी पसिना आउने गर्दछ। यसबाट शरीर नगन्हावस भनेर सकेसम्म नुहाउनु पर्छ। महिनावारीका बेला रगत सोस्ने कपडा वा प्याड बेला बेलामा फेर्नुपर्छ। प्याड फेर्नुअघि गुप्ताङ्ग साबुनपानीले राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ। प्याडका रूपमा कपडाको प्रयोग गरी पुनः प्रयोग गर्ने भए त्यो कपडालाई साबुनले धोएर घाममा सुकाउनुपर्छ। घामको किरणले जीवाणु मार्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
कुनै कुनै किशोरीको महिनावारी हुनुअघि वा भैसकेपछि योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ। यस्तो हुँदा आत्तिनु वा चिन्ता गर्नुपर्दैन तर पानी धेरै बगे, योनि चिलाउने वा पोल्ने समस्या देखिए तुरुन्त स्वास्थ्यसंस्थामा गई उपचार गराउनुपर्छ। महिनावारीका बेला धेरै हलचल गर्दा बढी रगत बग्छ भन्ने सोच पनि ठीक होइन। अझ हल्का कसरत गर्न सके शरीरका सबै भागमा राम्रोसँग रगत संचार हुन्छ।कसरतले पेटको मांसपेशीलाई बलियो पार्छ जसले गर्दा महिनावारीका बेला कम्मर दुख्ने समस्या धेरै कम हुन्छ।
महिनावारीका बेला कसै कसैको तल्लो पेट नराम्रोसँग दुख्छ। यसरी पेट दुखे तातोपानी हालिएको रबरको थैली वा सिसीले सेक्नुपर्छ। यति गर्दा पनि पीडा कम नभए चिकित्सकको सहयोग लिनुपर्छ। बढ्दो उमेरका किशोरीहरूले प्रशस्त मात्रामा लौह तत्व तथा भिटामिनयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ। यस्तो तत्व खास गरी हरिया सागपात, तरकारी, फलफूल वा गेडागुडीमा पाइन्छ।
कतिपय किशोरी पढाइ वा कामको व्यस्तताका कारण आफ्नो महिनावारी हुने दिन बिर्सन्छन्। यस्तो भए क्यालेन्डरमा मिति चिनो लगाउनुपर्छ। महिनावारी ठीक ठीक समयमा नभई धेरै ढिलो वा चाँडो हुने गरे स्वास्थ्यसंस्थामा गई जँचाउनुपर्छ। महिनावारी हुने समयमा हार्मोनका कारण अनुहार तैलीय हुन्छ। त्यसैले कतिपयको अनुहारमा डन्डिफोर आउँछ। डन्डिफोर कम गर्न बेसन वा मकैको मसिनो पीठो लगाई चिसो पानीले दिनको ३-४ पटक अनुहार धुनुपर्छ।
महिनावारी महिलाको मातृत्वसँग सम्बन्धित एक जैविक प्रक्रिया हो। महिनावारी सुरु भैसकेका किशोरीले कुनै पुरुषसँग यौन सम्पर्क राखे गर्भ रहन सक्छ। गर्भ रहने प्रक्रियामा यौन सम्पर्कका बेला पुरुषको शुक्रकिट महिलाको अण्ड ग्रन्थिबाट निस्कने डिम्बसँग भेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ किशोरीहरू पहिलो पटक महिनावारी नहुँदै गर्भवती हुनसक्छन्। पहिलो पटक महिनावारी सुरु हुने बेलामा अण्ड ग्रन्थिमा फुल पाकेर निस्कन खोज्दा संयोगवश यौन सम्पर्क भै शुक्रकिटसँग डिम्बको भेट भए यस्तो दुर्घटना हुन्छ।
किशोरीहरूले यो विषयमा सजग हुनुपर्छ। यद्यपि महिनावारी भएपछि लापरबाही गर्दा त्यसले विभिन्न नकारात्मक असर पार्नसक्छ।
Man Arrested For RapingaGoat In Chitwan,Nepal
सुरशालाले ‘यूट्युब आइडल’ गर्दै